Tube chando muchina - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
Ice kubereka chinzvimbo
3T / zuva chubhu yechando muchina
Matani matatu paawa makumi maviri nemana
5T / zuva chubhu yechando muchina
Matani mashanu paawa makumi maviri nemana
10 / zuva chubhu yechando muchina
Matani gumi paawa makumi maviri nemana
20T / zuva chubhu yechando muchina
Matani makumi maviri nemaawa makumi maviri nemana
Iyo kopi yeakanakisa uye ari nani pane akanakisa.
Zvakasiyana nemamwe mafekitori echando muchina, Herbin Ice masisitimu akasiya chiChinese chinyakare chisina kunaka chubhu yechando tekinoroji kubva 2009. Takateedzera Vogt tekinoroji kubva 2009
Herbin ice Systems yakatenga mamwe mashandisiro eVogt michina P34AL, kubva kune imwe Chinese chando chirimwa muna 2009. Takazvibvarura, ndokuteedzera zvese zvikamu uye dhizaini dhizaini. Isu tinoshandisa zvakafanana zvinopihwa vatengesi seVogt, sengeParker mvura level sensor, Parker inogara ichimanikidza vharafu uye zvichingodaro. Takateedzera Vogt's smart liquid supply, isu tinowedzera chinogashira chemvura pamusoro peiyo evaporator kudzivirira mvura slugging mu compressor, isu takawedzera vanopisa vekare-vanochinja kuti vagadzirise mashandiro ehurongwa. Isu takagadzirawo zvakawanda zvakagadziridzwa zvichibva pane iyo kopi kuti tiite yedu chubhu echando michina ive yakakwana sezvinobvira.
Nyanzvi dzinotaura kuti chubhu yangu yechando michina iri nani kupfuura Vogt izvozvi, nekuti mafuta edu anotenderera system inotsvedza, uye dhizaini yedu inoshamisira.
Kutenda kune yedu yepamusoro tekinoroji uye smart system dhizaini. Yedu chubhu echando michina inodya mashoma magetsi anoshandiswa kugadzira iwo akafanana iwo echando.
Semuenzaniso, ngativerengei ne20T / zuva Tube muchina muchina.
Mamwe maChinese emvura akanyorova Tube echando michina inoshandisa 100KWH yemagetsi ekugadzira yega 1 toni yechando.
Yangu Tube chando michina inodya chete 75KWH yemagetsi ekugadzira yega 1 toni yechando.
(100-75) x 20 x 365 x 10 = 1825000 KWH. Kana mutengi akasarudza yangu 20T Tube chando muchina, iye achachengetedza 1825000KWH yemagetsi mumakore gumi. Yakawanda sei 1825000KWH yemagetsi munyika yako?
3. Unhu hwakanaka nehurefu hwakareba.
80% yezvinhu pane yangu Tube echando michina yakafanana kana yakafanana neVogt.
Zvimwe zvinhu zvinotumirwa kubva kuUSA zvakananga.
Izvo zvinokuvimbisa iwe yemhando yepamusoro Tube echando michina ine yakanyanya kushanda mashandiro.
5. Kurumidza kuendesa nguva.
Hatidi anodarika mazuva makumi maviri ekugadzira Tube echando michina idiki pane 20T / zuva.
Hatidi anopfuura mazuva makumi matatu ekugadzira Tube echando michina pakati pe20T / zuva kusvika 40T / zuva.
Mutengi haamirire kwenguva refu kuti atore iyo Tube matime echini mushure mekubhadhara.
Heano paramende rondedzero yangu yakajairwa Tube echando michina yako yekureva.
Tube echando michina inogona kuve yakasarudzika, uye iyo paramende inogona kuve yakasiyana zvinoenderana.